Torolàlana haingana handefasana valizy amin'ny fiaramanidina | Vaovao momba ny dia
Maria | | fiaramanidina, mpitarika
Ny ahiahy lehibe ho an'ny mpandeha rehetra dia mihoatra ny fetra napetraky ny kaompaniam-pitaterana. Raha ny fanarahana ny famerana ny sidina an'habakabaka amin'ny valizy entina, ny laminasa sy ny hakingan-tsaina no mitana andraikitra lehibe.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy habe na lanja mahazatra ho an'ny valizy tanana izay eken'ny kaompaniam-pitaterana rehetra. Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka tsirairay dia mametraka refy isan-karazany amin'ny habe sy ny lanjany raha ny valin'ny tranony.
Amin'izany fomba izany dia tsy mitovy ny refy amin'ny valizin'ny tanana izay angatahin'i Iberia izay angatahin'i Vueling. Malalaka kokoa ny orinasa sasany amin'ny habe sy ny lanjan'ilay valizy fa ny sasany kosa mamepetra.
Mba tsy hianjera amin'ity toe-javatra ity dia manome anao torolàlana haingana izahay ary amin'ny antsipiriany ny fandrefesana ny valizy amin'ny tanana amin'ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana misidina any Espana.
1 Ahoana ny fomba hijerena valizy an-tserasera
2 Inona no tsy avela ao anaty valizy voamarina?
3 Misy famerana ve ny entana ao anaty entana?
4 Inona no mitranga raha mandanja na milanja mihoatra ny avela ny valizy?
5 Fatra fandrefesana valizy an'ireo zotram-piaramanidina be mpampiasa indrindra any Espana
5.1 Fatra fandrefesana enta-mavesatra entin'ny tanana
5.2 Fatra fandrefesana entana any Iberia
5.3 Fatra fandrefesana entana ataon'ny Air France
5.4 TAP fandrefesana entana any Portugal
5.5 Fatra fandrefesana valizy an'i Ryanair
6 Mamitaka mba tsy hihoatra ny fetra entin'ny tanana
Ahoana ny fomba hijerena valizy an-tserasera
Raha iray amin'ireo mpandeha tsy afaka mivezivezy amin'ny valizy fotsiny ianao dia tsy maintsy fantatrao fa ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana dia mamela anao hisoratra anarana sy hanao pirinty ny pasiteranao an-tserasera alohan'ny fivezivezena. Raha manana enta-mavesatra voamarina maimaimpoana ianao na efa nividy azy dia mbola mila mankany amin'ny mpanohitra ianao hampidina azy fa ny safidy 'fanaterana entana' dia haingana kokoa ary ny filaharana dia tsy dia ela.
Inona no tsy avela ao anaty valizy voamarina?
Na dia mihatra amin'ny enta-mavesatra aza ny ankamaroan'ny lalàna mifehy ny seranam-piaramanidina, misy ihany ny entana sasany izay tsy azo ampidirina ao anaty kitaponao voamarina ihany koa.
Raha nividy fanomezana ianao nandritra ny fialan-tsasatrao, nofonosina izy io dia tokony ho fantatrao fa raha eo am-pelatananao izy ireo dia afaka manokatra azy ireo ny fiarovana ny seranam-piaramanidina.
Afo, basy ary fitaovana fanapoahana. Anisan'izany ireo kopia.
Ranon-drivotra, aerosol na doro mandoro.
Fanahy fotsy na loko manify
Mandoko sy mandoko loko
Misy famerana ve ny entana ao anaty entana?
Ny fameperana ranon-javatra dia tsy mihatra afa-tsy amin'ny enta-mavesatra entinao mba hahafahanao misafidy ny mandeha miaraka amin'ireo makiazy tianao indrindra raha mbola azonao antoka fa nakatona tsara ny zava-drehetra. Na izany aza, misy fetrany ny alikaola: labiera 110 litatra, divay 90 litatra ary fanahy 10 litatra.
Inona no mitranga raha mandanja na milanja mihoatra ny avela ny valizy?
Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mandoa sarany fanampiny ianao amin'ny valizy mavesatra na be loatra. Matetika dia mora kokoa foana ny manao azy mialoha amin'ny Internet, koa raha fantatrao fa hihoatra ny fetran'ny enta-mavesatra ianao dia mendrika ny mividy kilao vitsivitsy alohan'ny handehanana any amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny frais amin'ny entana mavesatra dia manomboka amin'ny € 10 amin'ny zotram-piaramanidina lafo vidy toa ny Norwegian Air. Ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa, toa ny TAP Portugal na Air France, dia tsara kokoa ny mijery ireo fepetra entina napetrak'izy ireo.
Fatra fandrefesana valizy an'ireo zotram-piaramanidina be mpampiasa indrindra any Espana
Fatra fandrefesana enta-mavesatra entin'ny tanana
Ny refy tohanan'ny orinasa dia 55x40x20 centimetatra. Avelan'izy ireo hatramin'ny 10 kilao ny lanjany sy ny kojakoja iray ao an-trano.
Fatra fandrefesana entana any Iberia
Ny refy avelan'ny zotram-pitondrana Espaniola dia 56x45x25 centimetatra ary tsy mametraka fetra mavesatra. Izy io koa dia ahafahana mampiasa kojakoja kabine.
Fatra fandrefesana entana ataon'ny Air France
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka frantsay Air France dia mametraka fameperana entan'ny 55x35x25, miaraka amina 12 kilao ambony indrindra sy kojakoja ilaina ao an-trano.
TAP fandrefesana entana any Portugal
Ny refin'ny valizy am-pelatanan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka portogey dia 55x40x20 centimetatra ary valo kilao ihany no afaka milanja ilay valizy.
Fatra fandrefesana valizy an'i Ryanair
Ity zotram-pitaterana an'habakabaka ity dia ahafahanao mitondra kojakoja ao an-kabine izay tsy mihoatra ny folo kilao ny refy ary manana refy 55 sentimetatra.
Mamitaka mba tsy hihoatra ny fetra entin'ny tanana
Vao tsy ela akory izay, ny masoivohon'ny fitsangatsanganana an-tserasera eDreams dia nanao fanadihadiana manerantany momba ny mpivahiny Espaniola mihoatra ny 2.000 ary mpampiasa eoropeana maherin'ny 11.000 handinika ny fahazaran'izy ireo fonosana sy ny hevitr'izy ireo amin'ny fameperana entana.
Raha ny fanomanana valizy, dia izao no sasany amin'ny tetika ampiasain'ny mpandeha Espaniola hisorohana ny fihoaran'ny fetran'ny zotram-piaramanidina.
Fametrahana akanjo maromaro mba tsy hametrahana azy ireo ao anaty valizy (30%)
Vidio amin'ny Duty Free hahazoana kitapo fanampiny (15%)
Mitondra ireo zavatra mavesatra indrindra ao am-paosinao (16%)
Tehirizo ao ambanin'ny palitao ny entan'ny tanana (9%)
Mitsiky amin'ny mpiasa mifehy hanodina ny masonao (6%)
Afeno ao anaty valizy iray hafa ny valizy iray (5%)
Miandrasa amin'ny faran'ny filaharana ho an'ny entana hitondra ny fiaramanidina tsy andoavam-bola (4%)
Fanomezana mpiasa ao am-bavahady (2%).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Torolàlana haingana handefasana valizy amin'ny fiaramanidina
Akanjo mahazatra an'i Peroa